2018 Xagaaga: hageyaga taxanaha ah ee bilaabida ama dib u bilaabida - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM 2018 Xagaaga: hageyaga taxanaha ah ee bilowga ama dib u bilaabashada
Kornayl, Aadanaha, Luke Cage iyo taxane kale oo badan ayaa xagaagan kusoo laaban doona xilliyo cusub, halka bandhigyo cusub iyaguna sidoo kale jiraan. Raac tilmaamaha.
Haa, xagaaga waa waqtiga ugufiican ee lagu soo bandhigo dhammaan tusmooyinka kujira liiskaaga waligood koraya ee bandhigyada si aad ula qabsato. Laakiin, murugoon, silsiladuhu wali ma joojin inay sii daayaan xilliyo cusub ama xitaa taxane cusub inta lagu jiro muddadan. Halkan waxaa ku yaal hageyaga xagaaga ee waxa dhici doona bilaha soo socda, laga bilaabo Maajo ilaa Agoosto si saxan. Sida dhammaan tilmaamiyaasheena hore, ma noqon doonto liis dhammaystiran oo dhammaystiran, laakiin waa xulasho ballaaran oo ah shax mawduuc leh. Sidoo kale, cusbooneysiinta iyo ku darista ayaa si joogto ah loogu soo bandhigi doonaa kanaalka iyo ogeysiiska adeegga.
Taariikhda James Cameron ee Taariikhda Sayniska - Abriil 30 on AMC
Iyada oo loo marayo marxaladaha '6' oo ay ku lug leeyihiin dad badan oo caan ah, taxanaha dukumiintiyada taxanaha ah ee AMC ayaa dib u eegi doona asalka hiddaha faneed ee sayniska iyo su'aalaha badan ee ay soo bandhigaan. Waxay u badan tahay inay tahay inay soo xaadirto showga loogu talagalay taageerayaasha hiddaha. Iyo James Cameron.
Dib u eegista dhaqsida ah ee qeybta koowaad : xudunta u ah shisheeyaha, casharka koowaad runti waa mid aad u xiiso badan haddii mowduuca aad xiiseyneyso, mahadsanid marti sharaf badan iyo tixraacyo badan iyo qormooyin ku saabsan shaqooyin badan. Si taxaddar leh u muuji, showgu si xishoon ayuu u dhacayaa walxaha astaamaha u ah ee uu ka hadlayo.
Gawaarida (3 xilli) - May 2 on Shabakadda USA
Ka dib markii si naxariis leh loo dhigay gundhigga xilli-sannadeedka 1, gumeysi si run ah ayaa loo muujiyey xilli 2 waxaana wali la rajeynayaa in Xillikan 3 uu ku sii socon doono wadadan wanaagsan. Si kasta oo ay tahay trailer wuxuu kaa dhigayaa inaad rabto inaad rumeyso.
Cobra Kai (Xilliga 1) - May 2 on YouTube Red
Qeybtan Karate Kid Sannadihii 30 ka dib waxay leedahay fikradda qaldan oo dhan, laakiin waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la sugo kala-sooca qaybaha 10 ee daqiiqadihii 30 ee YouTube Red si loo helo wadnaha saafiga ah.
Roobka (Xilliga 1) - May 4 on Netflix
Qoyska "taxanaha Netflix ee asalka ahaa ee ka yimid wadan aan ku hadlin Ingiriisiga" Waxaan jeclaan lahaa inaan ... Roobka. Markaad ka timaaddo Denmark, bandhiggan dambe ee apocalytic-ka waa inuu rajeynayaa inuu kaa dhigo inaad ku sii xirnaato gurigaaga inkasta oo aad xagaaga imaaneyso.
Dib-u-eegista deg deg ah kadib xilli ciyaareedkii ugu horreeyay Yesh. Haddii taxanaha taxanaha Netflix uusan laftiisa ku xumaan, weli waxaa ka maqan xiisihii dhabta ahaa iyo asalnimadii in lagula taliyo ka baxsan qaabkiisa wax yar isbeddelaya. Marka haa haa si dhakhso ah ayey isu eegtaa lafteeda, laakiin taasi sabab ma ahan, waxaad u badan tahay inaad haysato waxyaabo fiican oo aad aragto.
Bini-aadamka (Xilliga 3) - 17 May / 5 Juun kanaalka 4 / AMC
Labadiisii ​​xilli ee hore, dib-u-soo-celinta Mareykanka iyo Ingiriiska ee Dadnimo Dhab Ah cadeeyay inuu xiiseynayo oo muujiyay tayo badan. Sidaa daraadeed ma sugi karno inaan aragno xilliga 3, si fudud.
Trollhunters (Xilliga 3) - May 25 on Netflix
Waxaa laga yaabaa in sida aan kaa fileynay gaar ahaan taxanaha dambe ee taxanaha ee cirifyada la dheereeyay Sheekooyinka ka socda Arcadia of Guillermo del Toro oo ku yaal Netflix, laakiin taas ka hor waxaa jiri doona xilli 3th of Trollhunters.
Soojiidashada (1 Xilliga) - Juun 6 on YouTube Red
Spin-off taxanaha filimka kicinta, maayad ayaa xiiseynaya da 'yarka Henrietta kaasoo, ka dib markii uu iskula dilay arday iskuulka ka mid ah, kaasoo ogaan doona awooda ay ku leedahay isgaadhsiinta. Awooda sida lama filaanka ah u badali doonta nolol maalmeedkiisa.
Marvel's Cloak & Dagger (1 xilli) - Juun 8 on Freeform
In la rumeeyo mawduuca iyo trailer of Cloak & Dagger, bartilmaameedka ugu weyn ee taxanaha Marvel ee ugu horreeyay ee la saxeexay Freeform (oo laga heli karo annaga oo ah Amazon Prime) waxay noqon doonaan da 'yarta. Bandhigu ma aha inuu qof walba raalli ka noqdo, laakiin weligeen kama nabad galno mucjiso.
Fikradeena ka dib marxaladaha 2: Dharka Marvel iyo Dagger: Dib-u-eegisteena Suuban ee La Yaabka leh Ka dib Dhacdooyinka 2
Voltron: Difaaca Legendary (6 Xilliga) - 15 June ee Netflix
Row qaybta "taxanaha carruurta" ee Netflix, Voltron sidoo kale carruurta waaweyn. Caddaynta, si dhakhso ah ayaan kuu arkaa sannadaha 30 oo anigu ma aan sugi karo si aan u arko waxa xilliga 6 ee majaajilladaan wanaagsan.
Daanyeero 12 (Xilli 4) - Juun 15 on Syfy
Xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee 12 Daanyeero waxaa laga sii dayn doonaa kaliya toddobaadyada 4 ee Syfy. Go'aan kaas oo u oggolaanaya taageerayaasha inaysan haysan wax badan oo ay ku sugaan inta u dhexeysa dhacdooyinka.
Jaale (Xilliga 1) - Bisha Juunyo 20 ee Shabakadda Paramount
Hadaad jeceshahay Sicario ou Jahannama ama Biyaha Sare aad u badan tahay jeclaan Yellowstone oo leh Kevin Costner, halkaasoo qoys ka soo jeeda Montana, oo leh qaybta ugu weyn Mareykanka, ay ku dagaallamayaan dhulkiisa.
Marvel's Luke Cage (2 xilli) - bisha Juun 22 ee Netflix
Shakhsiyan ahaan, waan jeclaaday qeybtii hore ee Luke Cage, kahor intuusan seenyadu qarxin duulimaadka ugu dambayntiina soo jeediso taxane aad u dhexdhexaad ah. Waxaan rajeyneyaa in xilli 2 uu fiicnaan doono, laakiin joogitaanka Iron Fist ee tuurista waxna laguma guuleysto.
Wacdiye (Xilliga 3) - Juun 24 on AMC
Kadib xilli gaabis ah 1, Wacdiyuhu wuxuu ku qancay xilli 2 isagoo siinaya qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu wanaagsan ee 2017 taxanaha oo dhan. Aynu rajeyneynaa in xilliga 3, oo annaga nooga sii daayo OCS, uu raaci doono isla wadadaas.
Killjoys (Xilliga 4) - Julaay 10 on Syfy
Halka saaxiibkiis xagaaga Dark Xaalada waxaa si murugo leh u baajiyay Syfy, Killjoys waxay sii socon doontaa xilli 4, iyo xitaa 5ème ee 2019, taas oo noqon doonta tan ugu dambeysay.
Weerarka Titan (Xilliga 3) - July 22 on Wakanim
Waxay qaadan doontaa waqtigeeda, laakiin xilliga 3 ee Weerarkii on Titan ugu dambeyntii imaan doona xagaaga, iyo markan oo leh sheekooyinka taxanaha 24 si loo cafiyo.
Castle Rock (Xilliga 1) - Luulyo 25 ee Hulu
Taariikhda saxda ah ee imaatinka Castle Rock, taxane cusub oo Hulu oo salka ku haya howlo badan oo Stephen King, ma ahan mid sax ah. Laakiin waxaan rajeynayaa inay si wanaagsan u soo bixi doonto bilaha soo socda.
Si ka fiican Call Wac (Xilliga 4) - Agoosto 6 on AMC / Netflix
AMC waxay bilaabi doontaa baahinta xilliga 4 ee wareegga isugeynta breaking Bad horraantii Agoosto, iyada oo aan laga helin caddeyn lid ku ah Netflix inay soo jeedin doonto dhacdooyin dhacay sidii sanadihii hore.
Tom Clancy's Jack Ryan (1 Xilliga) - Agoosto 31 ee Amazon Prime Video
Mar horeba dib ayaa loo cusbooneysiiyay 2, qaabka (cusub ee cusub ...) ee qaabka caanka ah ee Jack Ryan xirtay waqtigan John Krasinski wuxuu imaan doonaa dhamaadka xagaaga. Waxaan noqon doonaa kuwa caashaqsan.
Fikradeena ka dib xilligii 1: Jack Ryan: aragtideena ku saabsan talaabooyinka taxanaha ah ee Amazon ayaa wax ku ool ah laakiin la saadaalin karo
Ozark (Xilliga 2) - Agoosto 31 ee Netflix
Badanaa marka la barbar dhigo breaking Bad, xilli-koowaad ee Ozark waxay ahayd layaab weyn xagaagii lasoo dhaafay Netflix. Xilliga 2 ma beddeli doonaa imtixaanka? Goor dhow jawaab
Ninkii ku sugnaa qalcaddii sare (3 Xilligii Xagaaga) - ?? on Prime Video
Ka dib muuqaalkii u horeeyey bilo badan ka hor, waqtiga qoritaanka khadadkaan Amazon gebi ahaanba way dhimatay oo ku saabsan 3 xilli ee Ninka ku jira Kaluunka Sare. Waxaan isku dayeynaa halkaan inaan ku niyadsannahay sii deyntooda xagaagan, laakiin wax aan yarayn ayaa ah.
Aqalka Kaararka (Xilliga 6) - ?? on Netflix
Kadib kiiska ku saabsan Kevin Spacey iyo ka saaritaankiisii ​​taxanaha, 6th iyo xilli kama dambaysta ah ee Golaha Cards wuxuu ka gaaban doonaa kuwii hore wuxuuna diiradda saari doonaa dabeecada Claire Underwood. Shaki iigama jiro in Robin Wright uu si hufan u fulin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee showga.
Had iyo jeer waa Sunny Magaalada Philadelphia: FX waxay u furmeysaa xilliyada 15 iyo 16
Atlanta: taxanaha dib ayaa loo cusbooneysiiyay 4e xilli
Gal Gadot wuxuu ku ciyaari doonaa Hedy Lamarr wasaaradaha Showtime
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/ete-2018-notre-guide-des-series-a-commencer-ou-reprendre-269797
Tilmaamaha: 39 CAMPING HcksS, WAAD KU ISTICMAALI KARTAA MAAL GAL AH
Kubadda Cagta PSG - Espoolan: Real Madrid waxay leedahay qorshe B haddii ay dhacdo inuu ku guuldareysto Mbappé - FOOT 01
PHOTO. Paul Pogba wuxuu soo bandhigayaa markii ugu horeysay wejiga wiilkiisa
Piers Morgan ayaa garaacay amiirka 'Andrew curling ***' 'waalan'
Hindiya: Xaqiiji in si habsami leh uu u socdo kalfadhiga jiilaalka, Madaxweynuhu wuxuu ku boorinayaa dhammaan dhinacyada | Wararka Hindiya
DADKA & LIFESTYLE7,586
Video dheeraad ah3,478